Amaphupho ngamakhala – iAfrika
Uma uphupha ukuthi ikhala lakho alikho kuwuphawu lebhadi (ikakhulukazi uma ugula). Uma uphupha ukuthi likhulu kakhulu uzoba yisigwili kodwa ube nobunzima ekutholeni uthando futhi uzojwayela ukuxabana nabanye. Uma lilihle lolu uphawu lenhlanhla futhi kusho ukuthi uzothandwa emsebenzini. Uma ubona ikhala lakho nje kuphela futhi ungazi ukuthi kungani kungenzeka ukuthi kusho ukuthi ukusebenza kwakho kanzima akuzukuba namvumzo. Okokugcina uma kuphuma igazi emakhaleni ephusheni lakho kungenzeka uhlangabezane nezinkinga maduzane.
6 thoughts on “Amaphupho ngamakhala”
Ngphuphe ngixakwe amafinyila into eyibhadi kabi… Kusho ukthin loku?
16/11/2019 at 09:01
Mhlawumbe kungenzeka ukuthi leli iphupho nje ngomkhuhlane? Bheka nalu ulwazi esinalo lapho uphupha ngomkhuhlane, funda lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngomkhuhlane/ Futhi akuzwakali kahle hle kuyiphupho lebhadi leli ophupha ngalo ngoba amaphupho ebhadi yilawa achazwa lapha, funda lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ebhadi/
Ngiphuphe ngiphuma amafinyila angapheli emakhaleni ngiyawadonsa Koda awapheli
Izimpawu ozichazayo yilezo ezivame ukuba yinkomba yokuphathwa wumkhuhlane. Sinayo-ke incazelo yokuphupha uphethwe wumkhuhlane, bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngomkhuhlane/
Ngiphuphe ngisilwa nomama wengane engathi ebelele nenyindoda esgcwele isdoda ebusweni nangaphansi
Ngiphuphe ikala lengane yami lilimele ebuya esikohlweni